OTU ESI ACHỌTA LAPTỌỌPỤ ZURU EZU - WINDOWS - 2019
Chọọ maka laptọọpụ zuru ezu
Maka ọrụ nkịtị nke kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ, ọ dị mkpa iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala (software) n'ụzọ ziri ezi na components ya: motherboard, kaadị vidiyo, ebe nchekwa, ndị nchịkwa, wdg. Ọ bụrụ na a zụrụ kọmputa ma enwee diski ngwanrọ, mgbe ahụ ọ gaghị enwe nsogbu, ma ọ bụrụ na oge agafela na achọrọ mmelite, mgbe ahụ, a ga-achọgharị software ahụ na Ịntanetị.
Anyị na-ahọrọ ọkwọ ụgbọala dị mkpa maka kaadị vidiyo
Ịchọta ngwanrọ maka kaadị vidiyo, ị ga-achọ ịma ụdị nkwụnye nke arụnyere na kọmputa gị. Ya mere, ịchọ ndị ọkwọ ụgbọala na-amalite site na nke a. Anyị ga-enyocha usoro niile ịchọta na ịwụnye nzọụkwụ site na nkwụsị.
Nzọụkwụ 1: Kpebie Ihe Nlereanya Kaadị Video
Enwere ike ịmụta nke a n'ọtụtụ ụzọ, dịka ọmụmaatụ, site na iji ngwanrọ pụrụ iche. Enwere ọtụtụ mmemme maka ịchọta na ịnwale kọmputa nke na-enye gị ohere ịhụ àgwà nke kaadị vidiyo.
Otu n'ime ndị a ma ama bụ GPU-Z. Ngwaọrụ a na-enye nkọwa zuru ezu banyere njedebe nke kaadị vidiyo ahụ. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ ọ bụghị naanị ihe nlereanya ahụ, kamakwa ụdị nsụgharị nke ngwanrọ eji.
Download ma mee ihe omume GPU-Z. Mgbe ịmalite windo mepee na njirimara nke kaadị vidiyo.
N'ọhịa "Aha" A na-egosi ihe nlereanya, na n'ọhịa "Ọkwọ ụgbọala" - ụdị onye ọkwọ ụgbọala ahụ ji.
Ụzọ ndị ọzọ ị pụrụ isi mụta ihe site n'isiokwu a, jiri nlezianya tinye aka na mbipụta a.
Gụkwuo: Otu esi achọpụta akara ngosi vidiyo na Windows
Mgbe ị chọpụtara aha nke vidiyo, ị ga-achọta ngwanrọ dị mkpa maka ya.
Nzọụkwụ 2: Chọọ ndị ọkwọ ụgbọala na kaadị vidiyo
Tụlee ịchọta ngwanrọ na kaadị vidiyo nke ndị nrụpụta ama. Ka ịchọọ maka ngwaahịa ngwanrọ sitere n'aka Intel, jiri ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Intel
Na windo "Chọọ ihe nbudata" Tinye aha nke vidiyo gị.
Pịa na akara ngosi ahụ "Chọọ".
Na windo nchọta, ị nwere ike ịdee ajụjụ ahụ site na ịhọrọ osị gị na osị. "Ndị ọkwọ ụgbọala".
Pịa na ngwanrọ achọtara.
Obere windo dị maka nbudata onye ọkwọ ụgbọala, budata ya.
Hụkwa: Ebee ka ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala maka Intel HD Graphics
Ọ bụrụ na onye mepụtara kaadị ahụ bụ ATI ma ọ bụ AMD, ị nwere ike ibudata ngwanrọ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Ụlọ ọrụ gọọmenti AMD
Dejupụta ụdị ọchụchọ ahụ na ebe nrụọrụ weebụ nke onye na-emepụta ihe.
Pịa "Gosi nsonaazụ".
Ahu ohuru ga - aputa ya na onye odu gi, budata ya.
Hụkwa: Nrụnye ọkwọ ụgbọala maka ATI Mobility Radeon kaadị vidiyo
Ọ bụrụ na ị tinyelarị kaadị vidiyo site na ụlọ ọrụ nVidia, mgbe ahụ ịchọọ maka ngwanrọ, ịkwesịrị iji akwụkwọ ọrụ kwekọrọ.
Jiri nhọrọ 1 ma jupụta ụdị.
Pịa na "Chọọ".
Akwukwo nke nwere software choro gosiputara.
Pịa "Download ugbu a".
Hụkwa: Ịchọta na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka nvidia GeForce kaadị vidiyo
Enwekwara ike imelite software ahụ na-akpaghị aka, ozugbo site na Windows. Iji mee nke a, mee ihe ndị a:
Banye "Onye njikwa ngwaọrụ" ma họrọ taabụ "Ihe ntaneti vidiyo".
Họrọ kaadị vidiyo gị wee pịa ya.
Na menu na-egosi, họrọ "Ndị ọkwọ ụgbọala di elu".
Ọzọ, họrọ "Akpaaka akpaaka ...".
Chere maka nsonaazụ ọchụchọ. Na njedebe nke usoro ahụ, usoro ahụ ga-egosipụta ozi ọhụụ.
Ọtụtụ mgbe, laptọọpụ na-eji kọntaktị arụmọrụ arụmọrụ arụpụtara site n'aka Intel ma ọ bụ AMD. Na nke a, ịkwesịrị ịwụnye ngwanrọ site na saịtị nke laptọọpụ laptọọpụ. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ha na-emegharị maka otu ihe nlereanya nke laptọọpụ ma nwee ike iche na nke a na-eziga na ọnụ ụzọ ámá onye ọrụ ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, maka ụlọ ọrụ laptọọpụ ACER, a na-eme usoro a dị ka ndị a:
banye na weebụsaịtị ACER;
Ebe nrụọrụ weebụ ACER
tinye nọmba nọmba nke laptọọpụ ma ọ bụ ihe nlereanya ya;
họrọ site na ndị ọkwọ ụgbọala ahụ achọrọ na-adaba na kaadị vidiyo gị;
Nzọụkwụ 3: Wụnye Software
Ọ bụrụ na ebudatara ngwanro na modul arụmọrụ na ndọtị .exe, weghaa ya.
Ọ bụrụ na ebudatara faịlụ archive mgbe ị na-ebudata onye ọkwọ ụgbọala ahụ, kpochapụ ma jiri ngwa ahụ.
Ọ bụrụ na nbudata ngwanrọ abughi faịlụ nwụnye, weghaa melite site na iji njirimara nke kaadị vidiyo na "Onye njikwa ngwaọrụ".
Mgbe ị na-emelite aka, kọwaa ụzọ na nbudata ebudatara.
Mgbe ị wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka mgbanwe iji mee ihe, malitegharịa kọmputa ahụ. Ọ bụrụ na echichi nke ngwanro ahụ ezighi ezi, akwadoro ịlaghachi na ochie ochie. Iji mee nke a, jiri ọrụ a. "Nweghachi usoro".
Gụkwuo banyere nke a na nkuzi anyị.
Ihe omumu: Otu esi weghachite usoro Windows 8
Na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala niile mgbe nile maka ihe niile dị na kọmpụta, gụnyere kaadị vidiyo. Nke a ga-eme ka ọrụ gị enweghị nsogbu. Dee ihe ndị a, ị gụrụ ịchọta ngwanrọ na vidiyo vidiyo ma melite ha.